:Bọchị: February 15, 2020
Günümüzde yüksek oranlarda ve güvenli kazancın adresi olarak görülen kripto para piyasasında en doğru ve güvenilir yatırım için kripto para piyasasının anlık takip edilmesi gerekiyor. Kripto para piyasası dünyadaki olumsuz [More ...]
The Ministry of Industry na Technology Industrial Safety na Nnyocha General Manager Mehmet Bozdemir, Bursa Chamber of Commerce and Industry (BCCI) maka oge mbụ site mbuli emejuputa dị ka ndị kasị pụrụ ịdabere na nche atụmatụ na Turkey [More ...]
Ankara Metropolitan Mayor Mansoor ngwa, Turkey mbụ mobile ngwa Smart City "Capital Mobile" ngwa na-akọrọ ndị ọha na eze. Nzukọ nzukọ nke a na-eme na Nzukọ Nzukọ Mgbakọ Obodo. ndị ome iwu, ndị ọwa-achị obodo, ndi obodo [More ...]
E wepụrụ mkpebi nke TCDD Personnel Ünal Karadağ n'ọnọdụ ya na Izmir ma chụga Malatya n'ihi mgba nke ndị isi na ndị otu United Transport Employees Union. TCDD kwụsịrị ọrụ ya na Izmir wee chụga Malatya [More ...]
A ga-abawanye njem na Marmaray n'ihi nnukwu ọchịchọ. Mmụba mbụ bụ n'etiti Maltepe na Zeytinburnu. N’ihi ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị njem, a na-eme atụmatụ ime ka njem njem na Marmaray dịkwuo elu. Maltepe-Zeytinburnu bụ ebumnuche mbụ nke Ministry of Transport na akụrụngwa na TCDD Tasimacilik. [More ...]
Mayor Demir 'Kachasị mma maka Sisun Trolleybus'
Onye ọka iwu obodo nke Samsun Metropolitan Mustafa Mustafa Demir kwuru, "Usoro kachasị mma maka Samsun bụ sistemụ taya eletrik nwere ọrụ anyị rụrụla ugbu a." Onye isi obodo Samsun Mustafa Demir, tram [More ...]
Uraw Cosmetics, nke na-arụ ọrụ n'ọhịa nke ngwaahịa ịchọ mma nke ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke na-ejikarị ndụ ha kwa ụbọchị ma nwee ebe dị mkpa na mpaghara ahụ na ihe ịga nke ọma ya na obere oge, na-enye ndị ahịa ya ngwaahịa sitere na ụzọ ndị sitere n'okike. [More ...]
Fegwọ ụgbọ njem ọha na Bursa na 2020 (Ọnụahịa ụgbọ ala, Uram na Bus)
Njikwa ụgbọ njem nke Bursa (BURULAŞ) bụ ọrụ ụgbọ njem nke Bursa Metropolitan Obodo. BursaRay na-enye BurTram njem njem obodo mepere emepe na njikwa bọs. Ursgbọ njem ọha nke Bursa ga-adị irè maka 2020 [More ...]
Diyarbakır Metropolitan Obodo haziri ihe omume na Karacadağ Ski Center na ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi a zụrụ n'ime gilọ Bilgi. Diyarbakır Ngalaba Obodo Na - ahụ Maka Ndị Ntorobịa na Ọrụ Egwuregwu, na - amụ akwụkwọ na Houselọ Ozi [More ...]
Mịnịsta ndị ọrụ na nchekwa Social Faiz Sucuoğlu gara ụlọ ọrụ ebe a ga-emepụta Günsel, ụgbọ ala eletrik mbụ nke mba ahụ, na Dr. Ọ natara ozi site n'aka İrfan Günsel gbasara ọmụmụ ahụ. si Ministry [More ...]
AnkaraKart bụ kaadị njem obodo ị ga-eji na-ebuga gị oge niile. Kaadị smart na-enweghị ike iji rụọ ọrụ site na ịbịpụta ha nso na ngwaọrụ ọgụgụ kaadị n'ime ụgbọ njem ọha na-ejikọ na EGO na kaadị ịgụ ihe ndị dị na ngwaọrụ ndị a. [More ...]
Ndị bi n'ime obodo nupụụrụ ụgbọ oloko ahụ ..! Gini mere eji emechie ọdụ ụgbọ oloko nke afọ 150?
Ndị bi na Derbent mere mkpesa na ọdụ ụgbọ oloko Derbent Historic agaghị arụ ọrụ. Historical Derbent Train Station na Kartepe, akara na - aga n'ihu na - adị n'etiti Köseköy na Pamukova nke General Directorate of State Railways Management [More ...]
Site na ihe ngwọta dị mfe, anyị nwere ike ịkpọte ndị dike a na-ehi ụra site na iji obere obere itinye ego na ịkpakọba ego na-abaghị uru. Site na itinye obere ego, anyị nwere ike iwelie ọkwa nke mmepe nke mpaghara azụmaahịa akụ na ụba anyị. Enwere ohere di otua n’obodo anyị.70-80 ụgbọ elu nwere ike daa [More ...]
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 15 February 1893 atzọ ụgbọ mmiri Anatolian
Taa na History 15 February 1893 Anlọ Anatolian Railway bịanyere aka na nkwekọrịta nkwụchi maka Ankara-Kayseri na Eskişehir-Konya. Tupu nkwekọrịta a, ndị mmegide na ndị German na ndị na-ahụ maka ọpụpụ nke Britain nwere nzukọ dị iche iche n'etiti ndị mmegide Britain [More ...]